LAVLEEN KAUR (DIETITIAN) အလေး၊ အလေးချိန်၊ အသက်၊ ခင်ပွန်း၊ ကလေးများ၊ - စီးပွားရေး
Lavleen Kaur (Dietitian) အလေး၊ အလေးချိန်၊ အသက်၊ ခင်ပွန်း၊ ကလေးများ၊
အခြားအမည် (များ) Dietitian Lavleen, Dt ။ Lavleen Kaur
အလုပ်အကိုင် အစားအသောက်, လက်တွေ့အာဟာရနှင့်စီးပွားရေးစွမ်းဆောင်ရှင်
အမြင့် စင်တီမီတာ၌တည်၏ - 155 စင်တီမီတာ
မီတာအတွက် - 1.55 မီတာ
ပေ & လက်မ၌တည်၏ - ၅ '၁ '
အလေးချိန် ကီလိုဂရမ်၌တည်၏ - ၄၈ ကီလိုဂရမ်
ပေါင်ထဲမှာ - 105 ပေါင်
ကုမ္ပဏီ / အဖွဲ့အစည်း အစားအသောက် Insight
ဆုများ, ဂုဏ်ထူး, အောင်မြင်မှုများ • Kaur သည်မလေးရှားနိုင်ငံ၊ International Excellence Awards မှ 'Chandigarh တွင်အကောင်းဆုံးအစာအာဟာရပညာရှင်' ကိုချီးမြှင့်ခြင်းခံရသည်။ ၁၉၉၉ ခုနှစ်တွင်သူသည်ဘောလီးဝုဒ်မှမင်းသမီးမှဂုဏ်ထူးများရရှိခဲ့သည်။ Kareena Kapoor ။
နယူးဒေလီ၊ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုဆုပေးပွဲတွင်သူမသည် '' အိန္ဒိယမြောက်ပိုင်းတွင်အမြင့်ဆုံးသောအလားအလာရှိဆုံးသောအသက်အငယ်ဆုံးအာဟာရပညာရှင် 'အဖြစ် ၂၀၁၆ ခုနှစ်တွင်ဂုဏ်ပြုခံရသည်။ အဆိုပါဆုခရစ်ကတ်အားဖြင့်တင်ပြခဲ့သည် Virender Sehwag ။
• Dietitian Lavleen သည် ၂၀၁၅ ခုနှစ်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာလူနေမှုပုံစံစတဲ့ Awards ဆုများ၌ 'Tricity in Dietitian Best' ဆုဆုကိုချီးမြှင့်သည်။ Abhishek Singhvi & Amar Singh က ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာလူနေမှုပုံစံစတဲ့ဆုပေးပွဲ 2015 မှာ။
မွေးနေ့ ၂၁ 1987ပြီ ၁၉၇၇ (အင်္ဂါနေ့)
ကျောင်း စိန့်စစ်သားအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာကျောင်း, Chandigarh
ကောလိပ် / တက္ကသိုလ် •အစိုးရအိမ်သိပ္ပံကောလိပ်၊ ချန်ဒီဂါ
ပညာရေးဆိုင်ရာအရည်အချင်း • M.Sc. အစားအစာနှင့်အာဟာရ
•ပညာရေးမဟာဘွဲ့ (M.Ed. )
• B.Sc. အိမ်သိပ္ပံ
UGC NET၊ CTET
လိပ်စာ Diet Insight, SCO 1130-31, 1st floor, 22B, Chandigarh, 160022
ဝါသနာ သဟဇာတ, ဥယျာဉ်နှင့်ယောဂကျင့်ခြင်းကစား
လက်ထပ်ထိမ်းမြားရက် ဒီဇင်ဘာ ၉ ရက် ၂၀၁၂ (တနင်္ဂနွေ)
ခင်ပွန်း / ဇနီး Jagandeep Singh က
ကလေးများ သူတို့က - Meharmeet Singh ကို (၂၀၁၃ ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာ ၆ ရက်တွင်မွေးဖွားသည်)
မိဘများ ဖခင် - Baljit Singh က
အမေ - Parvinder Kaur
မောင်နှမများ အစ်ကို - Gurleen Singh က
နှမ - Kiranjit Kaur
အစားအစာ Rajma Chawal, Dosa, ကုန်ကြမ်းဟင်းသီးဟင်းရွက်, ချောကလက် Brownie
သရုပ်ဆောင် (များ) Aamir Khan , Diljit Dosanjh
မင်းသမီး Vidya Balan
ခရီးသွားနေရာများ Amritsar, Shimla, ဒူဘိုင်း
အရောင် (များ) အပြာ၊ အဖြူ၊ အနက်ရောင်၊ ပန်းရောင်
Lavleen Kaur အကြောင်းလူသိနည်းသောအချက်အလက်အနည်းငယ်သာ
Lavleen Kaur ဆေးလိပ်သောက်ပါသလား။ မဟုတ်ပါ
Lavleen Kaur သည်အရက်ကိုသောက်ပါသလား
အဝလွန်ခြင်းအပေါ်သူမ၏အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲစဉ်အတွင်း Lavleen Kaur
ဆိုရှယ်မီဒီယာပေါ်တွင်သူမထူးခြားသော်လည်းရိုးရှင်းသောတင်ဆက်မှုသည်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးနှင့် 'Desi' ထိတွေ့မှုရှိပြီး၎င်းသည်သူမအားနက်ရှိုင်းစွာလူတို့၏ဘဝများနှင့်ထိတွေ့ဆက်ဆံရန်နှင့်သတင်းကိုထိရောက်စွာပေးပို့ရန်ခွင့်ပြုသည်။
အစားအသောက် Lavleen Kaur
Kaur သည်မတ်လ ၂၀၂၀ တွင်အမျိုးသမီးများအထူးထုတ်ဝေသော Urban Mélangeကိုလူနေမှုပုံစံစတဲ့မဂ္ဂဇင်း၏မျက်နှာဖုံးတွင်တွေ့ရသည်။
Lavleen Kaur သည်မဂ္ဂဇင်းအဖုံးတွင်ထင်ရှားသည်
သူမသည် Desi အိန္ဒိယအစားအစာနှင့်ဟင်းသီးဟင်းရွက်များတစ်တန်စားခြင်းကိုနှစ်သက်သည်။
ကောလိပ်တွင်သူမသည် M. Sc တွင်ရွှေတံဆိပ်ရရန် ၁% လျော့နည်းသွားပြီးဒုတိယနေရာရရှိခဲ့သည်။
Lavleen (ညာဘက်အဟောင်း) ညီအငယ်ဆုံး Gurleen Singh (ဘယ်ဘက်)
သူမသည် acrophobia ရှိပါတယ်; အမြင့်ကိုကွောကျရှံ့။
သူမသည်မိသားစု ၀ င်တစ် ဦး ကဲ့သို့သူမ၏ဖောက်သည်များနှင့်အတူအလုပ်လုပ်ကြောင်းလူသိများပြီးသက်ကြီးရွယ်အိုအမျိုးသမီးများကသူတို့၏သမီးနှင့်စကားပြောရန်လိုသည်ဟုထုတ်ဖော်ပြောကြားခဲ့ကြသည်။
ကျောင်းသူမိန်းကလေးများနှင့်အတူအစားအသောက် Lavleen Kaur
သူမသည်အတုနှင့်မိမိကိုယ်ကိုကြေငြာသောအာဟာရဓာတ်များကိုလူတို့အားသတိပြုမိစေရန် CANQC (အဟာရဆန့်ကျင်ရေးလှုပ်ရှားမှုများဆန့်ကျင်ရေးကင်ပိန်း) ကိုတက်ကြွစွာထောက်ခံသည်။
Lavleen Kaur သတင်းထောက်နှင့်စကားပြောနေစဉ်
suma kanakala မွေးနေ့
Hindi ဟုအမည်ပေးထားသည့် download, Ravi teja ရုပ်ရှင်စာရင်း
bradley Cooper ကအမြင့်ပေ
allu Arjun ၏ Hindi ဟုအမည်ပေးထားသည့်ရုပ်ရှင်
nandini အမှတ်စဉ်အတွက် nithya သိုးထီး